Moto G nyocha, nke kachasị mma n'etiti ama gam akporo ama | Gam akporosis
Moto G nyochaa: anyị nwalere nke ọma kachasị mma gam akporo ama
N'ihi na a dum ogologo izu, M nwere na m onwunwe ọhụrụ Motorola smartphone na Motorola Moto G 2014. ngwaọrụ a toro ọtụtụ mgbasa ozi, ịtụkwasị ya dị ka kacha mma ufọt ufọt nso gam akporo ama.
Olee otú ị pụrụ ịhụ na nyocha vidiyo site na nkụnye eji isi mee nke isiokwu a, ebe m jidere echiche m niile banyere Motorola a na-akpali akpali, ọhụụ ọhụrụ Motorola Moto G 2nd ma ọ bụ Moto G 2014 bụ ọnụ na, n'ihe metụtara ọnụ ahịa ego, naanị onye ọrụ na-akwụghị ụgwọ euro 179, na-enye anyị karịa njirimara teknụzụ zuru ezu na nkọwa na dị ike maka njirimara gam akporo; N'okpuru ebe a, m ga-agwa gị nkọwa niile gbasara ahụmịhe nke onye ọrụ m na Motorola Moto G 2014.
1 Chepụta ma mechaa
2 Ihe ngwaike na oru
3 Ndị kamera
Chepụta ma mechaa
Banyere aesthetic nke ma ọ bụ okokụre nke ọhụrụ a Motorola Moto G 2014, anyị na-eche ihu a kpam kpam imewe kedụ ihuenyo gị toro, na-aga site na 4,5 ″ na dayameta na 5 ″ na dayameta, ọzọ na akara na ugbu a na ọnọdụ nke onye ọrụ na-achọ ọnụ na dịtụ ibu meziri. Ihuenyo nke na 5 these a dị m ka ọ dịgidere na ihe zuru oke maka ihe onye ọrụ nke smartphone na-atụ anya taa.
Banyere ya ewu ihe, a sober ọnụ kwuru na nke ọ bụ uru pụta ìhè na imezi imewe na azu gi, azu azu ebe gi kennyeghari shei atụmatụ a robay obi na-adị nke ahụ na-enye ya aka kachasị adịchaghị mma mgbe ọ na-enye anyị njide nke na-egosi nchekwa.
Ihe ngwaike na oru
Banyere isiokwu nke ngwaike na oru Anyị chọtara ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ, ọkachasị n'ogo nke ihu ngwụcha ya na teknụzụ IPS LCD nke, dịka m kwuru na mbụ, abụrụla 5 'nha yana yana nchekwa Gorilla Glass 3.
Nhazi ahụ ka bụ Snapdragon 400 si aga Moto G, a quad isi processor na-agba ọsọ na a kacha ọsọ nke 1,2 GHz, ka na- edebe gigabyte nke RAM na ohere ikpebi ebe nchekwa dị n’ime 8 ma ọ bụ 16 Gb.
Banyere okwu nke batrị, ọ na-aga n'ihu na-enwe otu ikike dị ka ya uzo na- 2070 mAh, ikike batrị nke ga enye anyi iji gafere ụbọchị dum n'enweghị nsogbu na iji ojiji nke njedebe, ihe dị ka awa atọ nke ihuenyo ma ọ bụ ma eleghị anya ntakịrị karịa. Ikike nke yitụrụ anyị mma na nke dabere na mkpara anyị na-enye ọnụ ya, ọ ga-adị mkpa ịkwanye ya tupu ụbọchị ahụ agwụ.
Ọ diri m kpọmkwem 22 awa na-akwụghị ụgwọ, na nchapụta ruo na nke kachasị, enwere ike ijikọ njikọ niile. eji GPS maka ọkara otu elekere, egwu site na Bluetooth ruo ihe dị ka elekere, ihe dị ka elekere nke egwuregwu na oge elekere ọzọ n'etiti ikiri vidiyo na ịgụ akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị. Ihe niile ihe ndekọ Gmail ise mekọrịtaworo, yana mmekọrịta Facebook, Twitter na G + zuru oke.
Banyere ọdịdị nke igwefoto nke Motorola Moto G ọhụrụ a, ime ihe n'eziokwu ma ghara ịghọgbu onye ọ bụla, ma inwe budata mma n'elu aga nlereanya, ma na mma na-aga site na 5 megapixel mkpebi na 8 megapixels nke ụdị ọhụrụ aAnyị nọ n'ihu igwefoto dị mma mana na-enweghị ike ịlụ ọgụ na nnukwu ụdị dị na ahịa dịka ihe akpọrọ flagships nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Otu ọnụ ụlọ dị n'ime N'èzí na ebe ndị ọkụ na-enwupụta na-eme ọmarịcha foto, ọ bụ ezie na n'abalị ma ọ bụ n'ebe ọkụ na-adịghị mma ọ na-ahapụ ọtụtụ ihe ọ chọrọ.
Banyere igwefoto dị n'ihu, nke a esitela na megabytes 1,3 nke kachasị mkpebi ruo mgbe megabytes abụọ nke ahụ na-enye anyị, dị ka azụ ma ọ bụ igwefoto bụ isi, a ezigbo mma na ọnọdụ na-enwu gbaa.
Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ọnụahịa gam akporo ọhụrụ naanị maka naanị igwefoto ya, n'ọnọdụ ahụ Moto G 2014 abụghị ọnụ ahịa ị kwesịrị ịzụta ebe ọ bụ na, dịka m gwara gị na nyocha vidiyo, omume ya kachasị mma abụghị nke ọma na igwe foto ya.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọdụ nke njikọta n'etiti ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ sistemụ kachasị arụ ọrụ, na-ejide n'aka mmelite ọhụrụ na nsụgharị nke gam akporo na ahụmịhe onye ọrụ nke kachasị mma anyị nwere ike ịchọta taa maka ọnụahịa ahụ gbanwere nke naanị Onye ọrụ 179 n'efu, mgbe ị na-ahọrọ nwere ike ịbụ ndị ọzọ karịa na-ekpebi na purchasezụ nke a na-akpali akpali Motorola Moto G 2014 o Ọgbọ nke abụọ Moto G.
Anyị nwere ike ịzụta Moto G 2014 ọhụrụ n'ụlọ ahịa anụ ahụ dị ka El corte inglés ma ọ bụ n'ịntanetị na echekwa dị ka Amazon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto G nyochaa: anyị nwalere nke ọma kachasị mma gam akporo ama
Kedu mgbe a ga-ewepụta ọnụ na 16Gb nke nchekwa?
M na-ajụ n'ihi na n'oge a na-enweghị mgbọrọgwụ, enweghị ike itinye ngwa ahụ na sd kaadị.
Ndewo, enwere m mmasị n'ịzụ ya mana achọrọ m ka m nwee ike jikọọ na TV site na HDMI. Nwere ike ịnwale ma ọ bụrụ na enwere ike ijikọ ya site na MHL, Slimport ma ọ bụ eriri yiri ya? Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu
Enwere m mobile a maka izu 1 ma ọ gafere 4 awa nke ihuenyo nwayọ. Ọ bụ ihe kachasị mma maka ogo / ọnụahịa, atụ aro ya nke ukwuu!
Achọrọ m ya na moto g
Enwere m ajụjụ na ọnụ ọnụ a, nsụgharị Spanish ga-enwe ike ịrụ ọrụ na Latin America, ọkachasị na Nicaragua, ọ bụ n'ihi ajụjụ nke ndị agha ahụ, ebe a ọ na-arụ ọrụ naanị na otu 850. You nwere ike wepu obi abụọ a ndị enyi aaahhhh ma ọ bụrụ na software ga-enwe nsogbu na mba m dị ka mkpọchi wdg.
Ndewo, enwere m Nexus 4 ma ana m atụle ịgbanwe ya.
Nọgide na ọdụ ụgbọ ala a ga-agabiga oke azụ? Site na ihe m huru, ewezuga processor na RAM, ihe ndi ozo bu ihe yiri nke a.M jiri m mee ihe na netwọkụ mmekọrịta, nkwukọrịta. Naanị m chọrọ ka ọ ghara ịdaba na ntụgharị ma ọ bụ ngwa eji emechi ngwa ngwa.
Nexus 5 ma ọ bụ Lg G2 adịghị ọnụ ahịa!
O doro anya na ọ bụ njedebe zuru oke maka ojiji ị na-agwa m.
Ndewo, azụtala m ọnụ maka onye ọlụlụ m na naanị ọghọm anyị na-ahụ bụ na mgbe ana-akpọ oku, ụda olu na-ada oke ụda na ọ “na-agbanahụ” ntị nke onye ahụ na ekwentị ahụ. ịnụ ihe niile ... ọbụlagodi na anyị wedata olu, ọ na-ada ụda na onye ọ bụla chọtara banyere mkparịta ụka ahụ ..
O nwere ike ịbụ n'ihi nhazi nke okwu (elongated) ma ọ bụ na ọ naghị ekpuchi nke ọma?
enwere ike ijikọ ya na eriri HDmi
Kedu ihe ị jikọtara moto g na m nwere mmasị na nkọwa nke okwu ikpeazụ a, nke m bụ moto nke abụọ na ọ bụ 16 gb
Na-agba egwu na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị na Ubisoft's Just Dance Now
LG na-akparị iphone 6 Plus na ike ihu ya